TANDREVAKY NY FITSABOANA : Zazavavikely vao 2 volana avy natao vaksiny namoy ny ainy
Hataraina ny an’ireto ray aman-dreny raha nahita ny fiovan’ny toe-pahasalaman’ity menaky ny ainy taorian’ny nanaovana vaksiny azy. 30 juin 2017
Tokony ho 24 ora taty aorian’ny nanindroman’ilay mpitsabo azy mantsy dia niafara tany amin’ny fahafatesan’ilay zaza ny aretina hafahafa nahazo azy tampoka.
Zazavavikely vao roa volana monja ity namoy ny ainy. Araka ny fanazavana nomen’ny reniny dia tamina toeram-pitsaboana iray teny Analamahitsy no nanatanteraka ny fanaovam-baksiny azy ny reniny ny talata maraina lasa teo. “Tsy fantatro mazava izay tena nahazo azy fa rehefa tonga taty an-trano izahay dia ohatran’ny nanavinavy izy. Nihevitra izahay fa mpahazo ny zaza rehetra rehefa avy hatao vaksiny no mahazo azy. Nony tonga anefa ny alina dia tsy nitsahatra nitomany izy ary tsy niala tety an-trotroko mihitsy”, hoy ny renin’ilay zaza nitantara ny zava-nanjo azy.
Raha ny nambaran’ny rainy kosa dia niezaka niantso an’ilay mpitsabo nanao ny vaksiny ry zareo saingy tsy nisy afa-tsy ampahaefatra “paracétamol” no nasainy nomena ilay zaza mba hampidinana ny hafanany. Taorian’io anefa tsy nety nisava ny fanaviana nahazo ilay zaza. Teo vao nikoropaka nitondra azy teny amin’ny hôpitaly lehibe ireo ray aman-dreniny saingy vao mangiran-dratsin’ny alarobia, tokony ho tamin’ny 2 ora dia tsy tana intsony ny ain’ilay zaza.
Mametra-panontaniana ireo fianakaviana niharan-doza ny amin’izay mety ho antony nahatonga izao loza izao na noho ny tandrevaky ny mpitsabo na ilay vaksiny nampiasainy no efa tsy ara-dalàna intsony. Araka ny fanazavana nomena mpitsabo iray kosa dia nambarany fa mety hisy fiantraikany amin’ny zaza mihitsy ny vaksiny avy hatao aminy fa miankina amin’ny toe-batan’ny tsirairay io.
Mety misy, hoy izy, karazan’olona 48 ora aty aorian’ilay nanaovana vaksiny vao miseho ny fanaviana, misy kosa ny harivan’iny ihany fa miankina amin’ny toe-batan’ny tsirairay ny tranga mety ahazo ilay zaza. Manoloana ity zava-niseho ity dia mangataka ny mba hisian’ny fanadihadiana lalina avy amin’ny minisitera tompon’andraikitra ireto fianakaviana niharan-doza.
Naiditra am-ponja ilay lehilahy, arahin’ny Fitsarana maso ilay vehivavy namany FISOLOKIANA AVO LENTA (158) 14 octobre 2020 Ben’ny tanàna voarohirohy ho nanolan-jaza 9 taona mpiasa an-trano TANGAINONY – FARAFANGANA (144) 14 octobre 2020 Hentitra ny valin-kafatry ny Minisitra Lalatiana SERASERA SY ASA FANAOVAN-GAZETY (122) 14 octobre 2020 Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (98) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020